အင်ပီးရီးယဲလ် (အင်းဂလိပ်) ၊ မက်ထရစ် နဲ့ ရွှေမြန်မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အင်ပီးရီးယဲလ် (အင်းဂလိပ်) ၊ မက်ထရစ် နဲ့ ရွှေမြန်မာ
အင်ပီးရီးယဲလ် (အင်းဂလိပ်) ၊ မက်ထရစ် နဲ့ ရွှေမြန်မာ
Posted by ကထူးဆန်း on Oct 13, 2012 in Community & Society | 24 comments
ကထူးဆန်း . ဒီမယ် ကျွန်မပြောမယ် ။ ကျွန်မက စည်းကမ်းလိုက်နာမှ ကြိုက်တာ ။ ကားကို သတ်မှတ် မိုင်နုန်း အတိုင်း မိုင် ၃၀ ထက် ပိုမမောင်း နဲ့ ။ မှတ်ထားနော် ။
ဟာရီရာကားသစ်ကြီးမောင်းလာသော ယာဉ်မောင်း အသစ်ချပ်ချွှတ် ကထူးဆန်း ကားနောက်ခန်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဒေါ်ပဒုမ္မာ အသံကြောင့် လန့်သွားသည် ။ မိုင်ခွက်ကို ကမန်းကတန်းပြန်ကြည့်လိုက်သည် ။ အရှိန်ပြဒိုင်ခွက် တွင် ကီလိုမီတာ ၈၀ ပြနေသည် ။
သတ်မှတ် မိုင်နုန်းက မိုင် ၃၀။ ယခု ပြနေတာက ကီလိုမီတာ ၈၀ ။ ဒါဆိုရင် နှေးတာလား မြန်တာလား ။ ကထူးဆန်း မသိ ။
ကထူးဆန်း တွေ့ဘူးသည့် မြန်မာပြည်က ကားတွေ အားလုံးမှာ ကီလိုမီတာ နှင့်သာ ပြသော ကားများ သာဖြစ်သည် ။ သို့သော် သတ်မှတ် မိုင်နုန်းများ က မိုင်နှင့် ဖြစ်သည် ။ တစ်မိုင်မှာ ဘယ်နှစ်ကီလို ရှိလဲ ။ မိုင် သုံးဆယ် မှာ ဘယ်နှစ်ကီလိုလဲ ။
မြန်နေလို့သာ ပြောတာ နေမှာ ဟုဆိုကာ ကား အရှိန်ကို ကထူးဆန်း လျှော့ချလိုက်သည် ။ ။
ပန်းရံဆရာ ။ ခင်ဗျားကို ကြွေပြား နှစ်ပေချပ် ကပ်မှာမို့ ဘေစင်ခုံကို နှစ်ပေ လုပ်ပေးထားလို့ ပြောတာ ။ အခု ကြည့်စမ်း ။ ကြွေပြားက သေးနေပြီ ။ ခင်ဗျားကို သေသေချာချာ ပြောနေရက်နဲ့ ။
မဟုတ်ပါဘူးဆရာ ။ ဒီလိုပါ ။
ဘာမဟုတ်တာလဲ ။ ဒီမှာ ကြွေပြား တင်ထားတာ ။ ကြည့်ပါလား ။ ကြွေပြားက နဲနဲ သေးနေပြီး ခင်ဗျား ခုံ က နဲနဲကြီးနေပြီ ။ ခင်ဗျားတို့ အလုပ် လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ မတိကျဘူး ။ ကျုပ် အမြဲပြောတယ် ။ ကျုပ်ကတိကျမှ ကြိုက်တယ် ဆိုတာ။
ဦးဦးပါလေရာ ၏ ဆူငေါက်သံက အလုပ်ခွင်အတွင်း ဟိန်းထွက်လာသည် ။ ပန်းရံဆရာ ကထူးဆန်း ရှင်းပြတာကို နားမထောင် ။
ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကထူးဆန်း အယောင်ယောင် အမှားမှားတွေဖြစ်ကုန်သည် ။
ဒီမှာကြည့်ပါဆရာ ။ ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ ခုံ က နှစ်ပေအတိပါဘဲ ။
ဘာကွ ။ ဒါဆို ကြွေပြားက ပေခိုးထားတာ ပေါ့ ။ ဟုတ်လား ။ ဒီကြွေပြားရောင်းတဲ့ ဆိုင် ငါ သွားချဲမယ် ။
နေ..နေပါဦးဆရာ ။ ကြွေပြား က ပေ နဲ့ လာတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ စင်တီမီတာ နဲ့ လာတာပါ။ ကြွေပြား က ၆၀ စင်တီမီတာ ရှိတော့ ဒီက လူတွေက ပြီးလွယ်စီးလွယ် နှစ်ပေ ချပ်ဘဲ ပြော နေကြတာ ။ တကယ်တော့ နှစ်ပေ မပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ဒါဆို စောစောက ပြောပါလား ဗျ ။ ခုတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။
ကျွန်တော် ပြန် ခုတ်ပေးပါ့မယ် ဆရာ ။ ကျွန်တော် လည်း သတိ မထားမိလိုက်လို့ပါ ဆရာ။
အခုတော့ အလုပ်တွေလည်းပို ။ အချိန်တွေလည်း ကုန် ဖြစ်ကုန်ပြီ ။ ပစ္စည်း လေလွင့်တာ ခန ထားဦး ။ ခင်ဗျားတို့ က ခက်ပါတယ် ဗျာ။ ပြော မပြောချင်ဘူး ။
ဦးဦးပါလေရာ ပြောပြောဆိုဆို ခေါင်းတစ်ခါခါ နှင့် ထွက်သွားသည် ။ ။
အင်ဂျင်နီယာ ဒေါ်ဝေေ၀ အသံကြောင့် သံပန်းဆရာ ကထူးဆန်း တစ်ခုခု တော့အမှား လုပ်မိပြီဆိုတာ သိလိုက်သည် ။ ဒီတစ်ခါ ဘာများအမှားလုပ်မိလိုက်ပါလိမ့် ။ စဉ်းစားလို့မရ ။အလွန်တိကျသော အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ရမည် ကြုံးဝါးနေသူထံမှ ဒီလို အသံကြားရပြီဆိုလျှင် တစ်ခုခု တော့လွဲပြီဆိုတာသိသည်။
ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ အမ ။ ကျွန်တော် ဘာမှားလို့လဲ မသိဘူး ။
ရှင့်ကို ကျွန်မ သံပန်းလုပ်ဖို့ စကွဲပိုက် ၀ယ်ထားပေးတာ ။ ဘာကိစ္စ တစ်ချောင်း ထပ်ဝယ်ခိုင်းတာလဲ ။ ကျွန်မ ပြူတင်း ကျည်းဘောင် က အတွင်းခွင် လေးပေ ငါးပေ ဆိုတော့ တစ်ပေါက် ကို ၁၈ ပေ ဘဲ ကုန်မယ် ။ ၁၀ ပေါက် ပေ ၁၈၀ ဘဲ ကုန်မှာ။ စကွဲပိုက် တစ်ချောင်း ပေ ၂၀ ဆိုတော့ ၉ ချောင်းဘဲကုန်မှာမို့လို့ ၀ယ်ပေးထားတာ ။ ဖြတ်စ ရှိလဲ ကိစ္စမရှိဘူး ။ ဆက် ပြီး သုံးလို့ပြောထားတာ အခု မလောက်ဘူးဆိုတော့ ဘာသဘောလဲ ။
စက်သေနတ်ပစ်သလို တလစပ် ပြောလိုက်သော ဒေါ်ဝေေ၀ စကားသံအဆုံးမှာတော့ ကထူးဆန်း ရင် နဲနဲ အေးသွားသည် ။ ဒါဆို သူရှင်းလို့ ရသည်။ သူ့ ပေါ့ဆ မှု့ မဟုတ် ။ အလွန်တိကျလိုသော အင်ဂျင်နီယာမကြီး ဒေါ်ဝေေ၀ ကို ဒီတစ်ခါတော့ သူ သတိမထားမိတာ ပြန်ပြောနိုင်တော့မည် ဆိုကာ ကထူးဆန်း ရင်ကော့ သွားသည် ။
အမ .. အမ ပိုက်တွေက ပေ ၂၀ ဆိုပေမဲ့ စင်တီမီတာ နဲ့ လာတာ မို့လို့ တစ်ချောင်း တစ်ချောင်းတိုင်းမှာ လေးလက်မ လောက် လျော့ နေတယ်လေ အမရဲ့ ။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လောက်တော့မလဲ ။ ။
အရှက်ကို မရှိဘူး ။
မဒမ်ထူးဆန်း ၏ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ပြောလိုက်သံကြောင့် ကထူးဆန်း လိပ်ပြာ မလုံဖြစ်သွားသည် ။ ကြည့်နေသော မန်းဂဇက် ကမန်းကတန်းပိတ်လိုက်သည်။
ပုဆိုးများ ကျွတ်နေလို့ လား ။ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါဆို ငါ နန်းခင်ဇေယျာ ပုံ ခဏခဏ ဖွင့် ကြည့်ကြည့်နေတာ သူတွေ့သွားတာ နေမှာ ဆိုကာ ကဗျာကယာ ရှင်းလိုက်မိသည် ။
အရှက်မရှိဘူး ပြောလို့ မရပါဘူးကွာ ။ ပြိုင်ပွဲ ၀င်တာဘဲ ။
ဘာရှင့် ။ ဘာပြိုင်ပွဲ ၀င်တာလဲ ။
ကထူးဆန်း ခေါင်းပိုစားသွားသည် ။ ဒါဆို နန်းခင်ဇေယျာ ကို ပြောတာ တော့ မဖြစ်နိုင် ။
ဟင် ။ ဘာ မှ မဟုတ်ဘူး ။ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ။ မင်းက အရှက်မရှိဘူး ပြောတော့ ဟို .. ဟိုကွာ ..သီချင်းဆို ပြိုင်တဲ့ အိမ်မက်ဆုံရာ (၃) ကို ပြောတာလားလို့ ..
ရှင့်..မလဲ … အူကြောင်ကြောင် နဲ့ .. ဒီမှာလေ မတွေ့ဘူးလား ။ သူဌေးတွေ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွေ ထောင်ပြီးခိုးစား ကြတာကို ပြောတာ..
ဟာကွာ .. မင်းကလဲ .. အဲ့ဒီလို မပြောပါနဲ့ ။ သူတို့ က တစ်ဂါလံ ကို ၄.၅ လီတာ နဲ့ တွက်လို ပါကွာ ..
ရှင်ဘဲယုံ ။ လူတွေက ပြီးလွယ်စီးလွယ် တစ်ဂါလံ မှာ ၄.၅ လီတာ ဆို ပြောတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြိး အဲ့ဒါနဲ့ ကာကွယ်သွားတာ ။ တစ်ဂါလံ မှာ ဘယ်လောက်လီတာ ဆိုတာ အတိအကျ ပေးရမယ်ဆိုတာ မသိနေမလား ။
ဒီမယ် ကိုထူးဆန်း ..လွယ်တာတွေ ခက်အောင်လုပ်ပြီး လုပ်စားနေကြတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြိလဲ ။ တစ်လီတာ ဘယ်လောက်ဆိုပြီးရောင်းလိုက်လဲ ရတာဘဲ ။ အဲ့ဒါက်ို တစ်ဂါလံဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး လုပ်စား တာ .. ဟင်း .. လူမိမှ ၄.၅ လီတာ လုပ်မိလို့ပါဆိုပြီး .. မသိရင်ခက်မယ် ။
အင်း.. ခက် .. ခက် ။ ခက်တာဘဲကောင်းတယ်။ ကထူးဆန်း စိတ်ထဲ ကြိတ်ပြောပြီး မန်းဂဇက်ပြန်ဖွင့်လိုက်သည်။ ။
ကမ္ဘာတွင် imperial units (English units) သုံးသော နိုင်ငံ နည်းသထက် နည်းလာပါပြီ ။ အင်္ဂလန် နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွင်ပါ metric unit သို့ ကူးပြောင်းနေပါပြီ ။ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံက တော့ အားလုံးကို ဖက်တွယ်ထားဆဲပင် ။ တစ်ပဲ ။ တစ်ပြား စသည့် အထူကို သုံးနုန်းနေမှု့များ လည်း ရှိနေဆဲ ။အလေးချိန် ဆိုလဲ တစ်ဆယ်သား နှစ်ဆယ်သားမှ စကာ ပိဿကို သုံးစွဲဆဲ။
မက်ထရစ် စံနစ်ကို ကူးပြောင်းရန် အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျမှု့များ ရှိနိုင်သော်လည်း ပြောင်းလဲ သွားသင့် နေပါပြီ ။ အစိုးရမှ စ၍ တစ်ဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့စံနုန်းထဲ ၀င်ရောက်သင့်ပါပြီ။
တစ်ကယ်တော့ မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်လာသော ပစ္စည်း အများစုသည် မက်ထရစ် စံနစ်နှင့် သာ များပါသည်။ ထိုမက်ထရစ် စံနစ် အတိုင်းအတာများ နှင့် လက်ရှိသုံးနေသော စံနစ် အတိုင်းအထွာ များကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများလည်း ရှိနေနိုင်သေး သည်ကို သတိပြု သင့်ပါကြောင်း။ ။
MES (myanmar engineerin society) ကနေလည်းစပြီး တခုခု လုပ်သင့်နေပါပြီ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ ကိုထူးဆန်းခင်ဗျာ။
ကျန်တာဒွေဒေါ့ သိဘူး …
ဟို .. မြင်ကွင်း (၄) မှာဒေါ့ဖြင့် ရီလိုက်ရတာ … ခွိခွိ ..
ကြည့်နေသော မန်းဂဇက် ကမန်းကတန်းပိတ်လိုက်သည်။
80km/hr =50 mile/hr
ကဲထားပါဗျာ အဲဂဒါတွေ။ကျုပ်တို့နိုင်ငံ စနစ်ပြောင်းဖို့လိုနေတာအမှန်ပဲ။
imperial unitsကစနစ်မကျပါဘူး။ အရင်သူတို့ဘုရင်ရဲ့ အရှည်နဲ့တွက်သကိုးဗျ။metric unitက ကမ္ဘာ့အီကွေတာ လောင်၊လဒ်မျည်းနဲ့တွက်လို့ ပိုတိကျပါတယ်။
အရင်ကတော့ အသေးစိတ်သင်ဖူးပါတယ်။အခုတော့ စာပြန်သွားပြီ
လာမမေးကြပါနဲ့တော့။မသိတော့ဘူးဗျ။ကြာခဲ့ပြီကိုး ထပ်မေးနေရင် ပြန်မဖြေနှိုင်တော့လို့ပါ။တစ်ကျပ်မှမရပဲ ကျုပ်ကစာပြန်မဖတ်ချင်တော့ပါ။
ကျုပ်တို့ ဗျားတို့ ရေလဲဝတ်လို့ ပုံမှန်သုံးနှုန်းတဲ့ တရှော့ နှစ်ရှော့ ဆိုတာရော ဘယ်စနစ်က လာတာလဲ…။ ဆက်သုံး သင့်မသုံးသင့်… မြန်မာလို တချီ နှစ်ချီအစားထိုးရင် ပိုကောင်းမလား….
ခင်ညားဂျီးက လုပ်လိုက်ရင်အဲဂလိုချည်းဘဲ။စပြီးထွင်တာ ခင်ညားဂျီးလေ အဲတော့ ခင်ညားဂျီးပဲထွင်။
မောင်မောင်ဂီတို့ကိုလဲမေးလိုက်ဦး။သူတို့ဂိုဏ်းက ကျွမ်းပုံရတယ်။ကျုပ်တောင်ခင်ဗျားပါရင်၊ ဂိုဏ်းဝင်ရင်
ပေါင် နဲ့ ကီလို
ဒီမှာ ဈေးသည်တွေ က ချိန်တော့ ကီလို၊ ဈေးကို ပြထား တော့ ပေါင် နဲ့ ဈေး နှုန်း ကို စာလုံး အကြီးနဲ့ လေ။
ဥပမာ – ၁ပေါင် ကို ၁ကျပ် ဆိုရင် ၁ကီလို အတွက် ၂.၂ ကျပ် ကျတော့တာ။
ကိုယ်က ၁ကျပ် ကို ဘဲ ဝမ်းသာအားရ မြင်မိတာ။
၁ ကီလို = ၂.၂ ပေါင်။
မြန်မာက.. အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်ဖူးတော့.. အဲဒီအင်္ဂလိပ်စနစ်နဲ့ အရှိန်ရနေတာပါ..
ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက. SI(International System of Units) သုံးကြတာမို့.. အထူးသဖြင့်.. မြန်မာပြည်ထဲ သူတို့ကားဟောင်းတွေသွင်းတဲ့တိုင်းပြည်.. ဂျပန်ပေါ့..။ အဲဒီကကားတွေနဲ့
ပြောရရင်.. ယူအက်စ်လည်း.. အဲဒီ ပေါင်၊လက်မ၊မိုင် စနစ်ကြီးသုံးနေတာပဲ..
တိုင်းပြည်က စူပါပါဝါမို့.. ကမ္ဘာက.. ယူအက်စ်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ.. စံချိန်ညွှန်းညှိပြီး ပြန်လုပ်ပေးတယ်..။
အက်စ်အိုင်စနစ်လည်း.. ပေါင်၊လက်မ (အင်ပိ၇ီယယ်) စနစ်နဲ့တိုးတော့.. အတိုက်အခံဖြစ်ပြီး.. လူယဉ်ကျေးမှုနဲ့.. လူနေမှုတွေ.. တိုးတက်သွားသလားပဲ..
မြန်မာပြည်က.. ယူအက်စ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေများလာပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်နှစ်တွေမှာ.. တခုခုတော့.. ဖြစ်လာမယ်ထင်တာပဲ..။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ချင်ရင်.. ရှေးဘုရင်လက်ထက်ကတည်းက.. အလေးတင်းတောင်းစံညွှန်းတွေညှိရတာပဲ..။ ညှိခဲ့တာပဲ..
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့.. အက်စ်အိုင်ကိုပဲ သုံးစေချင်မိပါတယ်..။
“ပိဿာ၊ရွေး။ တတောင်၊တထွာ” စနစ်အပြီးဖျက်လိုက်သင့်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း…။
အမှန်ကတော့ တစ်ခုခုကို မူသေ သတ်မှတ်လို့ ပြောင်းသင့်ပါပြီ။
လွယ်သလို ညှိညှက်ပြီးလုပ်နေတာ ကြာပေါ့ ဗျာ
ကျနော်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကျွန်းသစ်တွေခေတ်စားတုန်းက နိုင်ငံခြားသားကို သစ်အချောထည်ရောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဟိုက မီလိမီတာ နဲ့ အတိုင်းပေးတယ်
ဒီက သစ်ဆွဲဆရာက လက်မတွေပေတွေနဲ့ဆော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ပစ္စည်းလက်အပ်ပြီးရော ဟိုက အတိုင်းမှားတယ်ဆိုပြီးလက်မခံတော့ဘူး။
“ ဒီမှာကထူးဆန်း ” ( မဒမ်ထူးဆန်း ၏ ခပ်မာမာအသံ )
ဟေ ဟမ် ဟိုက် ဘာလဲလို့ …
“ မန်းတလေးဂေဇက်မှာ အံစာတုံးဆိုတဲ့တစ်ယောက်ရေးရေးနေတဲ့ ထူးဆန်းသောလူကြီးဆိုတာ ရှင်ပဲမို့ လား ၊ ရှင်မန်ဘာဝင်ပြီး စာရေးနေတဲ့ဆိုက်လေ ”
ဟင်… ဟုတ်ရပါဘူးကွာ.. နို့ … ဘာလို့ လဲ
“ ဒီမယ်… ဘာမှ မုံလာဥ လုပ်ချင်မနေနဲ့ ၊ အဲဒီ အံစာတုံးက ရေးထားတာ ၊ မနေ့ ည ဗဟိုချိန် ၂ချက်တီးလောက်မှာတဲ့ သိမ်ကြီးဈေးအပေါ်ထပ်မှာတဲ့ ထူးဆန်းသောလူကြီး ကောင်းစားနေတယ် ဆိုပဲ… အဲဒါ ရှင်လဲ မနေ့ ညက ၄နာရီထိုးလောက်မှ ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့.. ဟင်းးး..ကဲ ရှင်းစမ်းပါဦး ”
အာ… အဲဒါ သူ့ ဟာသူ ရှေးတုန်းက အချိန်တွေနဲ့ ဇါတ်လမ်းဖွဲ့ ရေးထားတဲ့ဟာပါကွာ ၊ နို့ ပြီး အဲဒီ ထူးဆန်းသောလူကြီးဆိုတာကလဲ သူ့ ရဲ့ ဇါတ်ကောင်ပါဟ.. ငါမဟုတ်ရပါဘူး မိန်းမရယ်
“ ဟင်းးး.. ဟုတ်ရဲ ဟုတ်ကြည့်ပါလား… ဒီမယ် ရှင် ကျွန်မအကြောင်း သိတယ်မလား ”
သို့ နှင့် ကိုထူးဆန်းတစ်ယောက် မန်းဂေဇက်ဝင်ခွင့် တစ်ပတ်ခန့်ပိတ်သွားလေတော့သတည်း ။ အီကား ပြီးခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့် က မန်းဂေဇက်တွင် ကိုထူးဆန်း ပျောက်နေခဲ့ရသော အကြောင်းပေတကား ။
။။။ ပြီးပါပြီ ။။။
ကထူးဆန်းရေ ကျမကတော့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ celebrity တွေရဲ့ အရပ်မောင်းတွေ ကိုယ်အလေးချိန်တွေကို ဖတ်မိတဲ့အခါ ကျင့်သားမရှိလို့ ပြန်ပြန်တွက်ကြည့်နေရတဲ့ ဒုက္ခတော့ ခဏခဏရောက်တယ်။
မတိကျသောလူသားကျမကတော့ ဆက်သွယ်ချက်တွေပဲမှတ်ထားပြီး တခုခုဆို စိတ်တွက်နဲ့အက်စ်တီမိတ် တွက်လိုက်တာများတယ်..
1.5 kilometer=1 mile (1mile=22/15 km—->1 miles~3/2 kilometer)
တကယ်တော့ အစိုးရက ပြောင်းဖို့ စံနစ်တမျိုးတည်းတညီတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ပါရင် မခက်ပါဘူး….
ခက်တာက အစိုးရအဆက်ဆက်က လက်ငင်းမီးတွေ ငြိမ်းလို့မအားတာနဲ့ပဲ တိုင်းပြည်အကျိုးရှိမယ့်ကိစ္စ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြဘူး..။
လွှတ်တော်မှာ SI ကိုပြောင်းဘို့ အဆိုတင်တာ ဖတ်မိလိုက်တယ်
အဲဒီတုန်းကတောင် ပြည်သူတွေထဲမှာ သဘောတူသူလဲ ရှိရဲ့ ကန့်ကွက်ကြတာလဲ ကြားရတယ်
နောက်ပိုင်းတော့လဲ ဘာ မှ မကြားရတော့ပြန်ဘူး
အရင်တုန်းက ကောင်းမယ်ထင်လို့ ကျင့်သုံးခဲ့ပေမဲ့ ပြင်သင့်တယ် ပိုကောင်းမယ်လို့ ယူဆရင်
အမြန်ဆုံးပြင်သင့်တယ် လောလောဆယ် ပေးဆပ်ရတာတွေ ရှိပေမဲ့ ရေရှည်အတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့
လုံမလေးကတော့ ဆယ်တန်းတုန်းက သင်ထားတာလေး တစ်ခုကိုပဲ သွားသတိရတယ်။
3 unit systems-
FBS (foot, pound, second)
SI (standard international) unit = MKS
၀င်ရောက် အားဖြည့် မှတ်ချက်ပေးသူများ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နာမည်ယူသုံးထားတဲ့ ဦးဦးပါ ၊ အန်တီပဒုမ္မာ ၊မဝေေ၀ တို့တော့ ခွေးလွှတ်ပါ။
ဒီမှာ ကို ကထူးဆန်း ……….ဘာမှဟုတ်ဘူးခေါ်ကြည့်တာ
အခုမှ ပြန်ဖတ်တော့ ကိုထူးဆန်းက အကြားအမြင်ရနေသလိုပဲ။
24.10.12 မှတင်တဲ့ ကျမရဲ့ နှလုံးသားရှိလာတဲ့ အမြန်လမ်းမှာ ကျမ ကီလိုမီတာနဲမိုင်ကို မှားရေးထားမိတယ်။
စိတ်ထဲမှာ အရပ်ဆိုရင်လည်း ပေလက်မနဲ့ပြောမှ စိတ်မျက်စိထဲမြင်ယောင်တယ်။
city mart မှာ ၁ ကီလို ၊၁၀၀ ဂရမ်ဆိုရင် ကျပ်သားဖွဲ့ကြည့်နေမိတယ်။
နောက်ပိုင်း digital scale တွေမှာတော့ အလွယ်တကူဖတ်လို့ရပါတယ်။
ကောင်းတာကို ပြင်မယ်ဆိုရင် ခဏတော့ သည်းခံလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့။
စိတ်ထဲဖြတ်ကနဲပေါ်လာတာလေးရေးချလိုက်တာပါ… :harr: :hee:
“စလယ်ဝင် ဖင်မမဲခင်က ကွဲကြတယ်” ဆိုတဲ့ စကား ဒီလင်္ကာလေးမရရင် နားမလည်လောဘူးနော..
သို့မို့ကြောင့် ကထူးဆန်းဟု ကျော်ကြားပေတာကိုးးးးးးးး
ကထူးဆန်းကြောင့် အပေါ်က ကလေးမိုက်လည်း စာပြန်ကျက်နေရပြီ။
ဦးကြီးမိုက် ရေးထားတဲ့ အချိန်အတွယ်တွေ ဆို သိတောင် မသိတော့ဘူး ။
တိုက်ဆိုင်တာလား မသိ ။ အခုဆို ဓါတ်ဆီဆိုင် မှာ လီတာ ဈေး နုန်းဘဲ ရေးထားပြီး ရောင်းတော့တယ် ။ တစ်ဂါလံ ဘယ်လောက်ရယ်လို့ မရေးတော့ဘူး .. :hee: